■ကယျလီဖိုးနီးယားတှငျ ငှသေယျ သံခပျြကာယာဉျပျေါမှ ငှစေက်ကူမြားထှကျကသြဖွငျ့ ပွညျသူမြားကောကျယူကွ
အမရေိကနျပွညျထောငျစု ကယျလီဖိုးနီးယားပွညျနယျအဝေးပွေးလမျးမတဈခုပျေါတှငျ ငှစေက်ကူမြားကို တဈနရောမှ တဈနရောသို့ သယျပေးရသော သံခပျြကာယာဉျပျေါမှ ငှစေက်ကူမြားထှကျကခြဲ့သဖွငျ့ ယငျးလမျးပျေါတှငျ မောငျးနှငျသှားလာနသေော ယာဉျမောငျးမြား ကောကျယူခဲ့ကွသညျ။…
ဆနျဒီယာဂိုမွို့မှနေ၍ နိုငျငံတျောဗဟိုအာမခံကျောပို ရေးရှငျးရုံးခှဲတဈခုဆီသို့ ငှစေက်ကူမြား သယျယူလာသော ယာဉျပျေါမှ ငှစေက်ကူမြား ထှကျကခြွငျးဖွဈ သညျ။ ယငျး သံခပျြကာယာဉျ၏ တံခါပှငျ့သှားပွီး ငှစေက်ကူမြားထညျ့ထားသညျ့အိပျမြားထှကျကကြာ အထဲမှ ငှစေက်ကူမြား လမျးမပျေါပွနျ့ကြဲသှားခွငျးဖွဈသညျ။…
ထိုသို့ဖွဈခွငျးကွောငျ့ မောငျးနှငျ့နသေော ကားမြားရပျတနျ့ကာ ယာဉျမောငျးမြားက လမျးပျေါပွနျ့ကြဲနသေော ငှစေက်ကူမြားကို အလုအယကျကောကျယူကွခွငျးဖွဈသညျ။ငှစေက်ကူမြားကောကျယူသှားကွသူတို့အနဖွေငျ့ နီးစပျရာ အဝေးပွေးလမျးမရဲစခနျးမြာ;ဆီသို့ ပွနျလာပေးကွရနျ…
ဒသေအာဏာပိုငျမြားက ကွညောထားပွီး၊ ငှစေက်ကူမြားလကျဝယျမိသူ ၂ ဦးကို ဖမျးဆီးထားကွောငျးသိရသညျ။ပွီးခဲ့သညျ့ သောကွာနေ့ ဒသေစံတျောခြိနျ နံနကျ ၉နာ ရီ၁၅မိနဈခနျ့က ဖွဈပှားခဲ့သော အဆိုပါဖွဈရပျတှငျ ငှစေက်ကူတနျဖိုးပမာဏ မညျမြှထှကျကခြဲ့သညျဆိုခွငျးကိုမူ သကျဆိုငျရာက ထုတျပွနျကွညောခွငျးမရှိသေးခြေ။….
■ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင် ငွေသယ် သံချပ်ကာယာဉ်ပေါ်မှ ငွေစက္ကူများထွက်ကျသဖြင့် ပြည်သူများကောက်ယူကြ
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အဝေးပြေးလမ်းမတစ်ခုပေါ်တွင် ငွေစက္ကူများကို တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ သယ်ပေးရသော သံချပ်ကာယာဉ်ပေါ်မှ ငွေစက္ကူများထွက်ကျခဲ့သဖြင့် ယင်းလမ်းပေါ်တွင် မောင်းနှင်သွားလာနေသော ယာဉ်မောင်းများ ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။…
ဆန်ဒီယာဂိုမြို့မှနေ၍ နိုင်ငံတော်ဗဟိုအာမခံကော်ပို ရေးရှင်းရုံးခွဲတစ်ခုဆီသို့ ငွေစက္ကူများ သယ်ယူလာသော ယာဉ်ပေါ်မှ ငွေစက္ကူများ ထွက်ကျခြင်းဖြစ် သည်။ ယင်း သံချပ်ကာယာဉ်၏ တံခါပွင့်သွားပြီး ငွေစက္ကူများထည့်ထားသည့်အိပ်များထွက်ကျကာ အထဲမှ ငွေစက္ကူများ လမ်းမပေါ်ပြန့်ကျဲသွားခြင်းဖြစ်သည်။…
ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းကြောင့် မောင်းနှင့်နေသော ကားများရပ်တန့်ကာ ယာဉ်မောင်းများက လမ်းပေါ်ပြန့်ကျဲနေသော ငွေစက္ကူများကို အလုအယက်ကောက်ယူကြခြင်းဖြစ်သည်။ငွေစက္ကူများကောက်ယူသွားကြသူတို့အနေဖြင့် နီးစပ်ရာ အဝေးပြေးလမ်းမရဲစခန်းမျာ;ဆီသို့ ပြန်လာပေးကြရန်…
ဒေသအာဏာပိုင်များက ကြေညာထားပြီး၊ ငွေစက္ကူများလက်ဝယ်မိသူ ၂ ဦးကို ဖမ်းဆီးထားကြောင်းသိရသည်။ပြီးခဲ့သည့် သောကြာနေ့ ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၉နာ ရီ၁၅မိနစ်ခန့်က ဖြစ်ပွားခဲ့သော အဆိုပါဖြစ်ရပ်တွင် ငွေစက္ကူတန်ဖိုးပမာဏ မည်မျှထွက်ကျခဲ့သည်ဆိုခြင်းကိုမူ သက်ဆိုင်ရာက ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းမရှိသေးချေ။….
Previous Article ■အရပျဖကျရယောဉျတှသေုံးကာ စဈသားတှနေဲ့ တငျ့ကားတှကေို ခိုးသယျဖို့ပွငျဆငျလာတဲ့ တရုတျစဈတပျ
Next Article ■၂၀၂၄ သမ်မတရှေးကောကျပှဲကိုလညျး ဝငျပွိုငျခငျြသေးတယျလို့ ဘိုငျဒငျထုတျပွော